Fe (MAYA3)2 + NaOH → NaNO3 + Fe (OH)2
(rnn) (lng) (rnn) (kt)
(xoog leh) (trung) (xanh trắng)
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta Fe(NO3)2 + NaOH → NaNO3 + Fe (OH)2
Waa maxay xaaladda falcelinta Fe (NO3)2 () ee ay la falgasho NaOH (sodium hydroxide)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa NaNO3 (sodium nitrate) iyo Fe (OH) 2 ()?
Fe (NO3) 2 ayaa la falgala NaOH
Dhacdada ka dib Fe (NO3)2 () waxay la falgashaa NaOH (sodium hydroxide)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada Fe(MAYA3)2 + NaOH → NaNO3 + Fe (OH)2
9Fe (MAYA3)2 + 12HCl → 6H2O + 3MAYA + 5Fe (MAYA3)3 + 4FeCl3
koloriin koloriin biyaha nitrogen monoxide bir (iii) amooniyam koloriin bir ah
(rnn) (digo yara) (lng) (kh) (rnn) (dd)
(xoog leh) (xoog leh) (xoog leh) (la soco)
9 12 6 3 5 4 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 9Fe (MAYA3)2 + 12HCl → 6H2O + 3MAYA + 5Fe (MAYA3)3 + 4FeCl3
Waa maxay xaalada falcelinta Fe (NO3)2 () ay kaga falceliso HCl (hydrogen chloride)?
Fe (NO3) 2 ayaa la falgala HCl
Dhacdada ka dib Fe (NO3)2 () waxay la falgashaa HCl (hydrogen chloride)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 9Fe(MAYA3)2 + 12HCl → 6H2O + 3MAYA + 5Fe (MAYA3)3 + 4FeCl3
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee NO (hydrogen chloride)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh MAYA (nitrogen monoxide) badeecad ahaan?
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee Fe(NO3)3 (hydrogen chloride)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Fe(NO3)3 (iron(iii) nitrate) badeecad ahaan?
10Fe (MAYA3)2 + H2SO4 + 2KMnO4 → Fe2(NA4)3 + H2O + 2MnSO4 + K2SO4 + Fe (MAYA3)3
acid sulfuric KP biyaha sulfate potassium bir (iii) amooniyam
(rnn) (digo yara) (digo yara) (rnn) (lng) (rnn) (rnn) (rnn)
(xoog leh) (tiim) (xoog leh)
10 1 2 1 1 2 1 1 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 10Fe (MAYA3)2 + H2SO4 + 2KMnO4 → Fe2(NA4)3 + H2O + 2MnSO4 + K2SO4 + Fe (MAYA3)3
Waa maxay xaalada falcelinta Fe(NO3)2 () waxay kaga falcelisaa H2SO4 (sulfuric acid) waxay la falgashaa KMnO4 (potassium permanganate)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa oo u soo saari kartaa Fe2 (SO4) 3 () iyo H2O (biyaha) iyo MnSO4 () iyo K2SO4 (potassium sulfate) iyo Fe (NO3) 3 (iron (iii) nitrate)?
Fe (NO3) 2 ayaa la falgala KMnO4 / H2SO4
Dhacdada ka dib Fe (NO3)2 () waxay la falgashaa H2SO4 (sulfuric acid) waxay la falgashaa KMnO4 (potassium permanganate)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 10Fe(MAYA3)2 + H2SO4 + 2KMnO4 → Fe2(NA4)3 + H2O + 2MnSO4 + K2SO4 + Fe (MAYA3)3
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee Fe(NO3)3 (potassium permanganate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Fe(NO3)3 (iron(iii) nitrate) badeecad ahaan?
2Al + 3Fe (MAYA3)2 → 3 Fe + Al (MAYA3)3
aluminium birta amooniyam
(sax ah) (xanh trắng)
2 3 3 1 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 2Al + 3Fe (MAYA3)2 → 3Fe + Al (MAYA3)3
Waa maxay xaalada falcelinta Al (aluminium) kaga falcelisa Fe(NO3)2 ()?
Sidee falcelintu u dhici kartaa oo u soo saari kartaa Fe (iron) iyo Al (NO3) 3 (aluminium nitrate)?
Al wuxuu ku falceliyaa Fe (NO3) 2
Dhacdada Al (aluminium) ka dib waxay la falgashaa Fe(NO3)2 ()
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 2Al + 3Fe (MAYA3)2 → 3Fe + Al (MAYA3)3
Waa maxay xaalada falcelinta Fe(NO3)2 () ay kaga falceliso Zn (zinc)?
Dhacdada ka dib Fe (NO3)2 () waxay la falgashaa Zn (zinc)